एमाले एकता नहुनुमा योगेश भट्टराईले देखेका दुई कारण, पढ्नुहोस् बिस्तृतमा — Imandarmedia.com
एमाले एकता नहुनुमा योगेश भट्टराईले देखेका दुई कारण, पढ्नुहोस् बिस्तृतमा
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पार्टी बचाउन जरूरी भएको बताएका छन्। उनले यसका लागि नेताहरू गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने र साझा निष्कर्षका साथ अभियानमार्फत् एकता बचाउन जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै आज धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग साझेदारी गर्न तयार हुनु तथा खनाल र नेपाल ओलीसँगभन्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतसँग गठबन्धन गर्न तयार हुनु नै पार्टी एकताको मुख्य जड भएको भट्टराई बताउँछन्।
एमालेमा पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले एकता प्रस्ताव राखेका छन्। तर उक्त प्रस्ताव जालझेलपूर्ण रहेको आरोप नेपाल पक्षको छ। यसबीच ओली र नेपाल तर्फका नेताहरू पार्टी एकताका लागि संवादमै पनि छन्।
यस्तो छ भट्टराईको भनाइ:
एमालेको एकताको मुल जड?
कसले, किन र के का लागि गर्दैछ यो सब? एमाले एकताको समस्याको मुल जड यहिँ छ। यस विषयमा कमरेडहरु बीचमा गम्भिर छलफल हुनु र साझा निष्कर्षका साथ साझा अभियानमार्फत् एमालेको एकता बचाउन जरुरी छ।
यस्तै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रको जवाफका लागि सात दिनको समय मागेका छन्।जेठ १९ गते निर्वाचन आयोगले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई बैठकले गरेका निर्णयहरु अनुसूची अनुसार मिलाएर पठाउन भनेको थियो।
ठाकुर र यादव दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र आयोगमा पठाएका थिए। यादव पक्षले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। यस्तै ठाकुर पक्षले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
यसबारे दुवै पक्षले जेठ १८ गते आयोगलाई जानकारी गराएका थिए। आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ यादव पक्षले जेठ २० गतेनै पठाएको भए पनि ठाकुर पक्षले भने समय मागेको हो।
ठाकुर पक्षले आयोगलाई तीन दिनअघि पत्र लेखेर ७ दिनको समय मागेको छ। दुवै पक्षले आफूसँग कार्यकारिणी समितिको बहुमत पुगेको दाबी गरेका छन्। जसपाको कार्यकारिणी समिती ५१ सदस्यीय छ। जसमध्ये यादव पक्षले बुझाएको पत्रमा २७ जनाको हस्ताक्षर छ भने ठाकुर पक्षले हस्ताक्षर शंकलनकै लागि भनेर समय मागेको हो।